ကိုဝင်းဟိန်းရဲ့ မြန်မာစကားကိုလေ့လာတဲ့ပြဿနာတွေ။ – ၂ Burminglish | White Boy Learning Burmese
January 25, 2013 by Win Hein	29 Comments
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ မြန်မာလိုမရေးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်သစ်မှာ ကျွန်တော် မြန်မာစကားကိုလေ့လာမှုပိုများပါမယ်။ အဲဒီ့အတွက်ကြောင့် ဒီ ဝတ္ထုမှာ မြန်မာလိုရေးဖြစ်ပါတယ်။ ထားပါတော့ ဒီည Burminglish စကားအကြောင်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဗျာ။
???ကိုဝင်းဟိန်းရယ်… အဲဒီ Burminglishစကားဆိုတာဘာလဲပြီးတော့ ဘာလို့ ဝင်းဟိန်းအတွက်ပြဿနာဖြစ်တာပါလဲ။???
အရမ်းကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါခင်ဗျာ။ Burminglish စကားက အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာ(ဗမာ)ပေါင်းစပ်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
မတူပါဘူး။ Burglishဟာ စာရေးသားမူ့စနှစ် (writing system)ဖြစ်ပါတယ်။ Burminglishကတော့ စကားပြောစတိုင်(style)ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ…
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ခင်ဗျား train stationကို ရောက်ပြီးပြီလား။ Train ticket ရပြီ ဟုတ်?
ကျွန်မအရမ်း excitedဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ bestfriendက ဒီရုပ်ရှင်အရမ်း coolတဲ့။ေိေိေိေိ!!!
အဲဒီ ဝါကျတွေထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေသုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ Train station (ရထားဗုတာ ရထားဘူတာရုံ [ကျေးဇူးပါ Autumn]), train ticket (ရထားလက်မှတ်), excited (စိတ်လှုပ်ရှားသော), best friend (အခင်မင်ဆုံးသူငယ်ချင်း), cool (မိုက်သော), dictionary (အဘိဓာန်)သုံးဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေမှာ အားလုံး မြန်မာလိုပြန်ထားတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေ ဒီစကားလုံးတွေကိုအရမ်းသုံးကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့သုံးကြတာလဲဆိုတော့…
သူတို့အရမ်း arrogant (မာနကြီးသော၊ စိတ်ကြီးဝင်သော၊ အထက်စီးဆန်သော)ဖြစ်ကြတယ်။ “ဟီးဟီး ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေအရမ်းသုံးတတ်တယ်နော်?။ ကျွန်တော်အရမ်းတော်တာနော်!”
ထားပါတော့ ပထမ အချက်က… အင်္ဂလိပ်စကားကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘာသာစကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ချို့လူတွေက အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ရင် အဲဒီလူဟာ ပညာတတ်တစ်ယောက်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။
ဒုတိရာအချက်ကတော့ တစ်ချို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ မြန်မာမှာမရှိပါဘူး။ ဥပမာ…
အဲဒီစကားလုံးတွေထဲကတစ်ချို့ဟာ internetကလာတဲ့ဝေါဟာရတွေဖြစ်ပါတယ်။ Internetဖန်တီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါတုန်းက ဝေါဟာရအားလုံးဟာအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေကတော့ သိသာတင်ရှားပြီးသားမြန်မာစကားလုံးတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့…
ကျွန်တော့်တို့မြို့မှာ မြန်မာလူငယ်တွေ နဲ့ မြန်မာပြည်ကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ မြန်မာစကားလုံးတွေအစား အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကိုသုံးကြတယ်။ သူတို့ကျောင်းနေရင် ကျောင်းက အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေသင်ယူကြနေတယ်။ သူတို့ရဲ့မိဘတွေအလုပ်မအားလပ်ရင် သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား မသင်ပေးနိုင်ကြဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ကလေးတွေ Burminglishလိုအမြဲပြောကြတယ်။
***ကောင်းပါပြီ ကိုဝင်းဟိန်းရယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ မင်းအတွက် Burminglishစကား ပြဿနာဖြစ်ပါတာလဲ။***
ထားပါတော့ ကျွန်တော်ဖြေပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်အတွက် Burminglishစကား ပြဿနာဖြစ်တာလဲဆိုတာ… မကြိုက်ပါဘူးဗျာတို့! စိတ်ကူးကြည့်ကြပါဦး။ ကျွန်တော် မြန်မာစကားကို အရမ်းတတ်ချင်ပါတယ်နော်။ မြန်မာစကားကိုကောင်းကောင်းသိအောင် (သို့မဟုတ် အဘယ်မဆိုတဲ့ ဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းသိအောင်) နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ဝေါဟာရအသစ် တွေ့အသုံးပြုပေးရတယ်။ မြန်မာလိုကျွန်တော်ပြောနေရင်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေပဲဆက်သုံးရင် ကျွန်တော်ဘာမှမသင်ယူနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ အင်္ဂလိပ်လိုပင်ကိုပြောတတ်ပါတယ်ဗျာ။ ထို့အပြင် တခြားနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့ မြန်မာလူမျိုးကလေးတွေ အားလုံး Burminglishလိုပြောကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ဘယ်တော့မှာ မြန်မာဆန်ဆန်ပြောတတ်မှမဟုတ်ဘူး။
ထားပါတော့။ အခု ကျွန်တော်အိပ်ပါတော့မယ် ပရိသတ်တို့ရေ။ ဖတ်ရူ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ပြီးတော့ အမှားတွေခဲ့ရင်လည်း ကျေးဇူးပြုပြီး အောက်မှာ ပြင်ပေးကြပါဦး။
29 thoughts on “ကိုဝင်းဟိန်းရဲ့ မြန်မာစကားကိုလေ့လာတဲ့ပြဿနာတွေ။ – ၂ Burminglish”
Train station ( ရထားဘူတာ)
ပထမအရာ … ဒုတိယအရာလို့ ပြောမယ့်အစား .. ပထမအချက် .. ဒုတိယအချက်လို့ ပြောရင် စာကြောင်းက ပိုပြီး ချောမွေ့သွားပါမယ်။ 🙂
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ Estherရယ်။ ကျွန်တော် အဘိဓာန်တစ်အုပ်ထဲမှာ “အချက်”ကိုတွေ့ခဲ့တာပေမယ့် အချက်လို့ သို့ အရာလို့ရေးလင့်မှာလို့ မသေချာခဲ့ပါဘူး။
အဲဒါကို “မွေးစားစကားလုံး” လို့ Myanmar grammer မှာငယ်ငယ်ကသင်ပါတယ်. We were colonized by British foralong time and many English words are adopted. eg. driver- ဒရိုက်ဘာ, director- ဒါရိုက်တာ. English လိုညှက်ပြောတာကသူများအထင်ကြီးအောင်ပြောတာလူတိုင်းမဟုတ်လောက်ပါဘူး ကာလံဒေသန် (ကာလဒေသအရ, literally according to the time and place). နယ်မှာတသက်လုံးကြီးပြင်းလာတဲ့လူနဲ့ပြောဆိုရင် English လိုညှက်ပြောတာဟာအဆင်မပြေပါဘူး Please don’t take the wrong way, since English is embedded in our education, most of us can understand but not everyone is exposed to speaking English andalot of vocabularies. ဒါပေမယ့် တခါတလေကျတော့အင်းဂလိပ်လိုပြောတာကပိုတိကျတယ် ပြတ်ပြတ်သားသားပြောချင်တဲ့နေရာဆိုပိုကောင်းလားလို. Opposite is true. If you wanna soften what you are saying. let say “Dude you have to finish this project by 10 am, and i want to get it all done with no mistake and on the clock!!!!” အကိုရေဒီ project လေးဆယ်နာရီမှာအားလုံးအပြီးအစီးလုပ်ပေးထားပါနော်. <= there adpoted word!! actually i can't type burmese well, took meawhile to type this all up. May be i should learn how to type burmese from you. hehehe..
အဲ့လိုရေးတာ ပြောတာကို Burminglish လို့ခေါ်တာ ၀င်ဟိန်းပြောမှ သိတော့တယ် xD အင်း… လူအထင်ကြီးခံချင်လို့ အင်္ဂလိပ်လို ညှပ်ပြောတဲ့လူတွေ ရှိသလို ကိုယ်တိုင်က မြန်မာလိုဘယ်စကားလုံးသုံးရမှန်းမသိလို့ အင်္ဂလိပ်လိုညှပ်ပြောရတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ မသိတာရှိ ပြောတဲ့လူကို ပြန်မေးပေါ့ 😀 😀 စာတွေရေးပါဦး ဗွီဒီယိုအသစ်လည်း လုပ်ဦးလေ 🙂
February 8, 2013 at 00:57
ကျွန်မ နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မဟာတန်းတက်တော့ ခုလို မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ တခြားဘာသာစကားတွေ တွဲသုံးတဲ့အကြောင်းသင်ရတယ်။ အဲဒါကို အင်္ဂလိပ်လိုတော့ code switching နဲ့ code mixing လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီ့အတွက်လဲ assignment လုပ်ရတော့ ဂျာနယ်တွေထဲက အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာ မြန်မာစကားနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားညှပ်သုံးတာတွေကို လိုက်ရှာတော့ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ မြန်မာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်စကားတွေညှပ်သုံးတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ ဒါကလဲ ကျွန်မကတော့ ဆင်ခြေပေးရမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်မှာ ကျောင်းတက်ခဲ့တော့ မြန်မာစကားထက် အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတာ ပိုလွတ်လပ်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ကိုဝင်းဟိန်းရေးထားသလို အပျင်းထူးတာရယ်၊ စကားလုံးရှိမှန်း မသိတာရယ်ကြောင့်ပါ။
February 8, 2013 at 01:16
ပြောပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် madyjuneရယ်။ ဟုတ်ကဲ့ madyjuneရဲ့စကားတွေဟာ သဘာဝကျပါတယ်ဗျာ။ အခု ဝင်းဟိန်းဟာ Sociolinguisticsအတန်းတစ်တန်းကို တက်နေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ code switching နဲ့ code mixing အကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ လူတချို့ဟာ စကားပြောရင်း code switchလုပ်တာပြီးတော့ သဘောမပေါက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် code switching အကြောင်း မဆွေးနွေးခဲ့ပါဘူး။ ဘာဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုတော့ မနာကြီးသော နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာစကားမသိသော လူတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် မြန်မာစကားကို သင်ယူဆိုရင် Burminglishလိုပြောနေတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတာ အကူအညီဘာမှမပေးတော့ပါဘူး။
မင်္ဂလာည (သို့) မင်္ဂလာနံနက်ပါ။
February 8, 2013 at 01:09
မကြိုက်ပါဘူးဗျာတို့! ဆိုပဲ.. ဟားဟား.. အဲ့ဒီ့ဟာလေး ဘယ်ကနေကြားလား သင်လာလဲ.. သဘောကျသွားတယ်.. =D
ကိုဝင်းဟိန်း မြန်မာသီချင်းတွေနားထောင်တာသတိရလို့ဒီဝက်ဆိုဒ်မှာသီချင်းအသစ်တွေရှိဒယ်လို့ Chatbox မရှိလို့ဒီမှာဘဲ comment လုပ်သွားဒယ်နော်
http://myanmarmp3album.com/ .. btw what’s your gtalk bro?
Btw, Ko Win Hein. This is notaဝတ္ထု but an article ဆောင်းပါး or blog post (ဘလော့ဂ်)စာတစ်ပုဒ်. Sorry, I wish I could type in Burmese for you. But I don’t use Zawgyi font. And thanks million for writing this. I freaking hate that Burminglish.
ဪ အဲဒီ့စကားလုံးကို မသိသေးပါဘူးဗျာ။ ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီမသုံးဘူးဆိုရင် ဘယ် ဖောင့်သုံးပါတာလဲ။
I use any Unicode standardized fonts such as Myanmar3, Yungkhio, MyMyanmar, WinUniInnwa, MyanmarText and so on. But no worries. 90% of Myanmar people do not use such fonts. Just few weirdos like me have affection on it. 🙂
February 25, 2013 at 07:43
ကြှနျတျောလညျး တဈခါတဈလညျး unicode fonts သုံးပါတယျ။ ဖွဈနိုငျတာက အနာဂတျမှာ ဒီ blogမှာ အခုံလုံး Padauk သို့မဟုတျ MM3ကို ပွောငျးမယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ bloggerတှေ အားလုံး unicodeလိုရေးတာစရငျ တခွားလူတှလေညျး unicodeသုံးကွမယျနျော။ တာ့တာ
And တစ်ချို့ is not correct spelling but တချို့ is. In case you have not found this yet, http://myanmarwords.pikay.org/. Hope it helps. 🙂
May Moe Thu @La Angel
ကိုဝင်းဟိန်း။ ကျွန်မနာမည် မေမိုးသူပါ။ အင်း မြန်မာမဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့ “မေ” လို့ခေါ်ကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက မိုးသူလို့ခေါ်တယ်။ မိုးသူကို ပိုသဘောကျတယ်။ ကိုဝင်းဟိန်း ပီပီသသ ခေါ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
တစ်ချက်ကလေး နည်းနည်းပြောချင်တာရှိတယ်ရှင့်။ “မိုက်တယ်ထင်ကြတယ်” အဲ့လိုရေးထားတာလေးတွေ့လိုက်တယ်။ Awesome, Fantastic အဲ့ဒါမျိုးကို ပြောချင်တာလို့ယူဆတယ်။ ခု မြန်မာ(ဗမာ)လူငယ်တွေလဲ အဲ့စကားလုံးကို သုံးလာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာစကားမှာ အဲ့ဒါ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ ရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကလဲ “မိုက်လုံးကြီးလိုက်တာ” “အဲ့ဒီလူက မိုက်တယ် (ဆိုးတယ်)”။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်မှာ တော်တော်များများသုံးနေကြတယ်…ဟားးးး ဒီဘောင်းဘီလေး မိုက်တယ်ကွ။ မင်းဆံပင်က မိုက်လှချီလား…စသဖြင့် သုံးနေကြတာ Slang ပါ။ ပြောပြတာပါ။ မသုံးသင့်လား သုံးသင့်လားတော့ မဝေဖန်တတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုတွေ့တာကတော့ တစ်ကယ့် သေးသေးမွှားမွှား စာလုံးပေါင်းအမှားလေးပါ။ “ဖတ်ရူ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်” ဖတ် “ရှု” (ဟထိုး တစ်ချောင်းငင်ပါ။ နှစ်ချောင်းငင် အောက်ကမြင့်မဟုတ်ဘူးရှင့်)
ကျွန်မ ဒီထက်ပိုပြီး ကိုဝင်းဟိန်းအကြောင်းသိအောင် တစ်ခြားစာတွေ လိုက်ဖတ်လိုက်အုံးမယ်။
အော်….ဒါနဲ့။ မင်္ဂလာပါ 🙂
February 25, 2013 at 00:51
မင်္ဂလာပါရှင်။ ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် အရမ်းကြိုးစားမှန်း သိသာပေါ်လွင်ပါတယ်။ အားပေးလျှက်ပါနော်။
မြန်မာ စာပေ၊ မြန်မာ စကား တိကိုစိတ်ပါဝင်စား သင်ယူစွာ ကကောင်းဂုဏ်ယူပါယေ အကိုဝင်းဟိန်း..ဒေထက်မက သင်ယူတက်မြောက်နိုင်ပါစီလို့ ဆုတောင်းပီလိုက်ပါယေ။
March 18, 2013 at 02:51
မိမိဟာ ဘာသာဗေဒသင်ယူလေ့လာဖူးသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာစကားဟာ ဝေါဟာရအသစ်တွေကို မွေးစားခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ကြာလှပြီ။ နမူနာပေးထားတဲ့ ဝေါဟာရတွေက တစ်ချိန်မှာ “မွေးစားဆဲ” က ” မွေးစားပြီး” ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
May 6, 2013 at 12:09
ခုမှပဲ ဒီဘလော့ကို လာဖတ်ဖြစ်တော့တယ်… မြန်မာဘလော့ဂါတွေအများကြီးရှိပါတယ်… မဗေဒါ လဲ ဘလော့ရေးပါတယ်… ကိုဝင်းဟိန်းပြောမှပဲ စကားလုံးတော်တော်များများကို သတိထားပြီး မြန်မာလိုသုံးမှပဲ… အပေါ်က မဒီဂျွန်ပြောသလိုပဲ code switching တို့ဘာတို့ဖြစ်သွားတာနေမှာပါ… အချိန်အခါ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ပေါ့…
အလွန်အကျွံ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေချည်းပဲ ညှပ်သုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဟန်လုပ်ပြီး ကြွားချင်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်… သာမာန်ကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်လုံးစနှစ်လုံးစတော့ အင်္ဂလိပ်လိုထည့်ပြောကြတာပါပဲ… မာနကြီးလို့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး… ခုလို မြန်မာစာ မြန်မာစကားကို မြတ်နိုးပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကိုတွေ့ရတာ ကျွန်မ မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀မ်းသာပါတယ်…. ကျွန်မဘလော့မှာ ကိုဝင်းဟိန်းရဲ့ လင်ခ့်ချိတ်ထားခွင့်ပြုပါနော်…
ဒါနဲ့ ကိုဝင်းဟိန်းရဲ့ ပြဿနာတွေလို့ သုံးမဲ့အစား… ကိုဝင်းဟိန်းရဲ့ ဒုက္ခ (Trouble) ဆိုရင် ပိုပြီး ပြေပြစ်ဆီလျှော်မယ်ထင်တယ်… ဒုက္ခ ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းက ပါဋ္ဌိဘာသာ စကားကလာတာ…
တစ်ခါတစ်လေ ကျရင် တိတိကျကျ ဘာသာပြန်လို့မရလို့ အင်္ဂလိပ်လို သုံးလိုက်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် ပိုထိရောက်လို့လေ
July 10, 2013 at 13:12
မင်္ဂလာပါ ကိုဝင်းဟိန်း ကျွန်တော် ဘလော့ဂါ မိုးသက်ဦးလွင်ပါ .။ မြန်မာစာကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖတ်တတ် လေ့လာတတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိပါတယ်.။ မြန်မာဝေါဟာရများနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မရှင်းလင်းတာရှိရင် ကူညီနိုင်ကောင်းကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်.။
ဘိုင်သဝေး . Youtube က တစ်ဆင့် ရောက်လာတာပါ.။
မြန်မာစကားက မွေးစားလွယ်ပါတယ်။ မွေးစားစကားလုံးတွေလည်း အများကြီးပါ။ အများဆုံး ပါဠိ နောက် အင်္ဂလိပ် အာရဗီတို့ တရုတ်တို့ ပေါ့။ ဒီနေ့လူများစုကတော့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေ မလိုဘဲသုံးလွန်းတာ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း မကြိုက်ပါ။ မွေးစားပြီး ပြင်ယူလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ အဲဒါမျိုးတချို့တော့ သဘောကျမိပါတယ်။ အပြောင်အပျက်သုံးရာက အတည်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေ… မက်ဆေ့ ကို မတ်စိလို့ ခေါ်လိုက်သလိုမျိုးပေါ့။ Burminglish သုံးတာတော့ အားမပေးချင်ပါဘူး။
အကို့ ဖေ့ဘွတ် မှာသူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ပါတယ် ကျွှန်တော့ဖေ့ဘွတ်အကောင့်က kyawwinnaing.01 ပါ ကျွှန်တော်ဆီမှာ add လုပ်ပေးထားပါ